CLD anjaran’Avaradrano Fitaovana no hozaraina fa tsy vola
Fitaovana no hozaraina fa tsy vola ho an’ny CLD anjaran’ny distrikan’Antananarivo Avaradrano, raha araka ny fanazavan’ny solombavambahoaka Gerry Randriambolaina.
Raha ohatra ka misy mila simenitra, hoy izy dia simenitra no hatolotra, miankina amin’ny filan’ny kaominina tsirairay avy. Tafiditra avokoa ireo karazana sehatra rehetra ka hahafahana mamaly ny filàn’ny mponina toy ny sehatry ny fanabeazana, ny fahasalamam-bahoaka, ny fotodrafitrasa. Ho an’ireo ben’ny tanàna manerana ireo kaominina 16 isa ao Avaradrano dia nomarihiny manokana fa mpiara-miasa sy mety aminy avokoa rehefa mijery ny fampandrosoana ny tanàna tsy an-kijery loko pôlitika. Tsiahivina fa nividianana engin ho an’ity distrika iray ity ny vola azo tamin’ny CLD tamin’ny taona 2018. Ao amin’ny distrika no mipetraka izy io. Ho an’ireo kaominina manana olana amin’ny resaka lalana eny Avaradrano dia afaka mampiasa azy avokoa saingy miantoka solika kosa. Izany no natao dia ho tombontsoan’ny besinimaro, hoy izy.